Home Wararka Qarax lala beegsaday Ciidamo Talyaani ah oo ka dhacay Muqdisho
Qarax lala beegsaday Ciidamo Talyaani ah oo ka dhacay Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qarax ka dhacay Agagaarka Wasaaradda Difaaca Soomaaliya oo ku taalla degmada Dayniile.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dhacay Aargada degmada xilli ay halkaasi maraayeen Gaadiid la sheegay in ay leeyihiin Ciidamo Talyaani ah oo kasoo baxay Wasaaradda Difaaca oo aan halkaasi ka fogeyn.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa la sheegay in uu geystay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in waxyeeladda ugu badan ay soo gaartay dad Shacab ah.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa Ismiidaamin.
Xilliga uu Qaraxu dhacay ayaa la sheegay in Aargada Dayniile ay aheyd Mashquul,Maadaama Iskuullada halkaasi ku yaalla Ardeyda dhigata badankooda lasoo Fasaxay.
Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu Qaraxu ka dhacay, waxaana guud ahaan ay xireen Wadooyinka soo gala Wadada uu Qaraxu ka dhacay.
Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in dhaawacyo ay soo gaareen labo Carruur ah oo goobta Maraayay, sidoo kalena uu jiro waxyeelo soo gaartay Ciidankii Caddaanka ahaa ee Qaraxa lala eegtay.
Previous articleWAR DEG DEG:Qarax Xoogan oo laga Maqlay Muqdisho
Next articleHalkee ku Dambeeyeen Ciidamadii lasoo Tubay Wadooyinka Muqdisho,Hal Askari oo Jid-walbo la istaajiyay
Guusha Madaxweyne Erdogan Maxeey ka dhigan tahay!!